အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ် ကုလအထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ပါဝင်ခွင့်မပြုရန် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့အကြား သဘောတူခဲ့ - Myanmar Pressphoto Agency
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ် ကုလအထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ပါဝင်ခွင့်မပြုရန် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့အကြား သဘောတူခဲ့
MPA Myanmar News NUG UKyawMoeTun UN
News September 14, 2021 ·0Comment
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် တက်ရောက် ပါဝင်ခွင့်မပြုရန် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့အကြား သဘောတူခဲ့ ကြောင်း Foreign Policy တွင်ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။​
ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်ဆုံးဖြတ်ရေးကော်မတီမှ မြန်မာနိုင်င်ငံ ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းပြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလက်ရှိနေရာတွင်(နိုဝင်ဘာလအထိ)ဆက်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်းပါရှိသည်။
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ ကိုယ်စားလှယ်ကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် စကားပြောခွင့် မပေးရန် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်အကြား သီတင်းပတ် တချို့ကြာ အချိန်ယူပြီး ကြိတ်ဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Foreign Poliy ရေးသားချက်တွင်ပါရှိသည်။
တရုတ်နှင့် အမေရိကန် ကမကထပြုလုပ် ညှိနှိုင်းသည့် အဆိုပါသဘောတူမှုကို ဥရောပ သမဂ္ဂ အီးယူ၊ အာဆီယံ နှင့် ရုရှားတို့မှအလွတ်သဘော လက်ခံထားကြောင်းကို ကုလ သံတမန် သတင်းရင်းမြစ်တွေကို ကိုးကားပြီး FP က ရေးသားထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့တွင် ယနေ့ ကျင်းပမည့် ၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံအစည်းအဝေးတွင် အရည်အချင်းစစ်ကော်မတီ – Credential Committee အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံကို ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
#UN #ဦးကျော်မိုးထွန်း #အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ #MPA #တရုတ် #အမေရိကန်
China and US Agree to Block Terrorist SAC Representative from Attending UN General Assembly
China and US have agreed to block the terrorist SAC representative from participating in the United Nations General Assembly, according to the Foreign Policy.
It was included that the UN Representative-determining Committee might postpone the decision for Myanmar representative and maintain U Kyaw Moe Tun in his current position until November.
The US and China had negotiations for weeks to effectively block the representative of the terrorist SAC from speaking at the UN Assembly, written in the Foreign Policy.
The agreement initiated by China and the US has also been informally endorsed by the European Union, ASEAN and Russia, the Foreign Policy described quoting diplomatic sources.
In the 76th United Nations General Assembly to be convened today in New York City of America, the Credential committee – nine member counties – will be announced.
#UN #UKyawMoeTun #TerroristSAC #MPA #China #America